Maitiro ekuvandudza kune iOS 9: Kwidziridza kana Kudzorera? | IPhone nhau
Maitiro ekuvandudza kune iOS 9: Kwidziridza kana Kudzorera?
Mumaawa asingasviki makumi maviri nemana tinenge tave neIOS 24 pane edu mafaera. Isu takatokupa iyo matipi anodikanwa ekuti zvese zvigadzike usati wagadzirisa iOS 9, asi ikozvino Zvasara kwatiri kuti tipindure mubvunzo wekusingaperi: Gadziridza kana Dzosera? Kugadziridza kunokurumidza uye kwakananga, uye kunofanirwa kunge kuri maitirwo azvo, asi kudzorera kunosiya yako iPhone yakachena uye isina zvingangoita glitches, kunyange zvichitora basa rakawanda kugadzirisa zvese. Ndezvipi zvakanakira nekuipira imwe neimwe yenzira? Matanho api aunofanirwa kutevera kuti uzviite? Isu tinotsanangura zvese zviri pazasi.
1 Kwidziridzo, nekukurumidza uye kunanga
2 Zvakanakira nekuipira kwekusimudzira
3 Kudzorera kuri kuitamba yakachengeteka
4 Zvakanakira nekuipira pakudzorera
Kwidziridzo, nekukurumidza uye kunanga
Sezvatakataura iyo inokurumidza uye yakatwasuka nzira ndeye yekuvandudza. Inosanganisira kurodha pasi sisitimu nyowani yekuisa uye kuiisa "pamusoro" yezvazvino, kuitira kuti mushure memaminetsi mashoma tinenge tave neyedu kifaa nedata redu rese nemaapplication asi neiyo nyowani yekushandisa. Kune dzimwe nzira mbiri dzekuzviita:
Gadziridza kuburikidza neOTA: kubva pachigadzirwa zvacho. Dhata chete "nyowani" inotorwa kubva muchirongwa, saka inokurumidza. Zvinokurudzirwa kuve neiyo iPhone kana iPad yakabatana nemutoro uye zvakakosha kuti ubatanidzwe neWiFi.
Gadziridza kuburikidza iTunes: kubatanidza chishandiso kukombuta yako uye kuvhura iTunes. Mune ino kesi, iyo yese inoshanda sisitimu inotorwa kune komputa yako, kunyangwe senge yapfuura kesi, ichaiswa pamusoro peiyo yekare uye yako iPhone kana iPad ichave iine data rese, multimedia mafaera, nezvimwe. kana maitiro apera.
Kugadziridza kuburikidza neOTA ndiyo yakasununguka sarudzo. Iwe unongofanirwa kuenda kuZvirongwa> Zvakajairika> Software Kwidziridzo. Zvinogona kunge kuti kana iwe ukangosvika chete kana tichizivisa kuburitswa kweyekuvandudza hazvizoonekwe parizvino, nekuti zvinowanzotora nguva kuti zvipararire kumidziyo yese.
Kana iwe ukasarudza kuzviita kuburikidza iTunes, iwe unofanirwa kubatanidza chishandiso chako, enda ku "Pfupiso" tebhu uye tinya pa "Tarisa kuvandudzwa" (kana Gadziridza), inoratidzwa mumufananidzo neiyo 1. Mirira maminetsi mashoma kuti izere faira kurodha pasi uye siya yako iPhone kana iPad yakabatana kusvika iyo yekuvandudza maitiro apedza.
Zvakanakira nekuipira kwekusimudzira
Kugadziridza inzira inokurumidza, yakavimbika inokonzeresa muchina ine vhezheni nyowani yesystem yakaiswa asi iyo inochengeta mafaera ako ese, marongero, mimhanzi, mavhidhiyo, nezvimwe, saka haufanire kutambisa nguva kugadzirisa kana kuisa chero chinhu gare gare.
A priori zvinoita senge yakakodzera sarudzo, asi hazvisizvo mune zvese zviitiko. Iyi yekuvandudza inochengeta akawanda ekare mafaira ekugadzirisa, data uye imwe junk ruzivo izvo zvinogona kukonzera kuti kifaa chako chikundikane, kusagadzikana, kuvhara maficha, kuwedzera bhatiri kushandiswa, nezvimwe.
Kudzorera kuri kuitamba yakachengeteka
Kudzoreredzwa kunofanira kuitwa kuburikidza iTunes. Iwe unofanirwa kubatanidza chishandiso chako kumakomputa, vhura iTunes, enda kune "Pfupiso" tebhu wobva wadzvanya pane "Dzosera" (iyo 2 mumufananidzo uri pamusoro). Maitiro aya anokusiya uine iPhone, iPad kana iPod Kubata neIOS 9 uye yakachena, kunze kwebhokisi. Iwe ucharasikirwa nemifananidzo yako yese, mavhidhiyo, kunyorera, nezvimwe. Asi usavhunduke, nekuti kana iwe wakatora matanho ekuzvibata atinoratidza muchinyorwa chedu pamusoro pekugadzirira kugadzirisa iwe haufanire kunge uine dambudziko.
Asi kana uchinyatsoda kunakirwa ne "yakachena" chishandiso iwe havazokwanisi kudzorera negadziriro yeparutivi kana. Iwe uchafanirwa kumisikidza zvese neruoko, kuisa zvinoshandiswa kuburikidza iTunes kana kurodhaunirodha zvakare kubva kuApp Store. Kudzorera uyezve kushandisa backup kwakafanana zvakafanana neKugadziridza, saka kana zvirizvo zvaunoda shandisa yekutanga sarudzo uye usatambise nguva kudzorera. Iyo yekuchengetedza ndeye izvo chete, kopi kana iwe ukarasikirwa nechimwe chinhu panguva yekuita, kwete kuti uishandise kugadzirisa zvakare iyo iPhone kana iPad. Zano rangu nderekuti kana kudzoreredza kwapera, kana iTunes ikakubvunza, gadzira yako iPhone kana iPad seyatsva.
Zvakanakira nekuipira pakudzorera
Kudzorera hakunonoke pane kugadzirisa kuburikidza iTunes. Kudhawunirodha iyo faira kubva kuhurongwa kunotora yakawanda yenguva yekuita, uye yakajairika kune dzimwe nzira mbiri. Ichokwadi kuti iwe uchafanirwa kugadzirisa zvese neruoko, kubva kuemail maakaunzi kuenda kuaccount yako Facebook, asi mukudzoka iwe unenge uine mudziyo wakachena, usina iwo ese marara mafaira anoungana nekufamba kwenguva uye anokonzeresa izvo zvinokundikana izvo dzimwe nguva Vanofashukira maforamu nevanhu vanogunun'una kuti bhatiri ravo harigare zvachose kana kuti iyo Kamera app iri kudzima.
Kana iwe uine maapplication ako akawiriraniswa neTunes, ako mapikicha nemavhidhiyo anotorwa pasi pakombuta yako, uye vako vokukurukura, makarenda, manotsi, nezvimwe. yakawiriraniswa muTunes haifanire kutora nguva yakareba kuti mudziyo ugadziriswe sezvaunoda. Pasina kupokana, ndiyo sarudzo yandinokurudzira kana uchiita kusvetukira kune itsva "yekare" vhezheni yeIOS..
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekuvandudza kune iOS 9: Kwidziridza kana Kudzorera?
Mhoro! Ndatenda pamberi pezve ruzivo.
Ini ndaida kuziva kana zvichikwanisika kudzoreredza iyo iPhone 6 se fekitori ine iOS 9, asi zvakare chengetedza iyo data rehutano?
Pindura kuna sammy
Nehurombo iwe haugone, hapana nzira yekuisa navo kuICloud.
Louis navarro akadaro
Ini ndakarasa password yeangu iPad Air 2 uye ndakaedza kakati wandei kuisa kodhi, iyo yakazoita kuti ndioneke pachiratidziro iPad YAKAremara ,,,,, ndakatevera nhanho dzese dzekuvandudza uye / kana kudzoreredza kuburikidza iTunes, asi kana ndapedza kuzviita, itunes haina kubviswa kubva kuIpad uye iyo iPad inoramba ichioneka YAKAremara uye kumusoro ichiita sekuti "HAIYADZE" ... handizive zvekuita nekuti ndiri kuyedza kwezuva rimwe kurodhaunirodha kugadzirisa kuburikidza iTunes uye handikwanise. chii chirikuitika? pamwe unogona kundibatsira
Pindura Luis Navarro
Mhoroi, ini ndaida kudzorera iPhone nePad sechinhu chitsva chishandiso, asi ndingaite sei kuti ndiwane vandinosangana navo uye manotsi kumashure? Ndatenda!
Pre-syncing ivo kuICloud
Carlo Solano akadaro
Mhoroi, Mangwanani akanaka ndapota ndanga ndichida kubvunza iwe maererano nemitambo, chii chinoitika kana ndikadzosera kuIOS 9? Ko mitambo yangu nekufambira mberi zvicharasika here?
Pindura Carlo Solano
Kana iwe ukadzorera hongu, zvese zvakarasika, asi kana iwe ukango gadziridza mafaera ese asara, ingo shandura iyo yekushandisa system
Pindura kune gerry
Mitambo yakawanda uye yakawanda inoshandisa iCloud, Game Center kana mamwe masisitimu ekuchengetedza mitambo. Mune ino kesi hauzove nematambudziko sezvo iyo data ichadzoreredzwa. Ivo vasina kuita chero yekuchengetedza system, uchafanirwa kutanga kubva pakutanga.
asi apuro rakati ios 9 raizorema kupfuura ios 8 uye izvi zvaizoita kuti tiwedzere kuyeuka, chii chiri nani kuita? kudzorera kana kugadzirisa? Ini ndinonzwa kuti kungo gadziridza ios mafaera masere kwaizogara imomo uye kwaizove kusunungurwa kwenzvimbo, asi pachokwadi handizive zvichaitika, ndapota pindura
Iyo nzvimbo inogarwa nehurongwa ichave shoma, asi marara akaunganidzwa haazobviswe. Sezvandiri kuratidza muchinyorwa, kwandiri sarudzo yakanakisa pasina kupokana ndeyekudzorera.
Manheru akanaka ipad yangu inoti yakaremara kana ichigadziridzwa uye kuidzosera inondiudza kuti haina ndangariro sezvandinosunungura ndangariro kana komputa isingazive mudziyo
ndine urombo ios 9 inorema zvishoma ndanga ndakanganisa
Oscar Serrano akadaro
Akanaka Luis, kutanga kukukorokotedza iwe nebasa raunoita iwe nechikwata chako pawebhu, YouTube uye mumapodcast ayo andisingarasikirwe nawo, ramba wakadai nekuti kunze kwekuzivisa ini ndinoseka navo. Zvino mushure meryo iyo yandakawana mubvunzo unouya.
Ndine iPhone 6 plus yandinofanira kuchinja mumwedzi kune imwe nyowani, zvakakodzera here kuzviita kuburikidza ne ota uye kwete kuomesa hupenyu hwangu kudzoreredza senge itsva nekuti ini ndichafanirwa kuzviita neiyo nyowani? Pandinoidzorera seyatsva pandinoisa iCloud, zvese zvakachengetedzwa zvichaiswa zvakananga, asi zvichave zvichine majeya mafaera nezvimwe?
Pindura kuna Oscar Serrano
Iwe haurasikirwa nechinhu chero chipi chinogadziridza kuburikidza neOTA uye kuyedza mashandiro ayo kwauri. Kana iwe ukaona kuti zvinokanganisa, iwe unogara uine nguva yekudzorera. NezveICloud, izvo chete zvinhu zvaunazvo mugore ndizvo zvichatorwa (mahofisi, makarenda, zvinyorwa, Safari dzinodiwa ...)
Ndatenda nezvasara zveshuwa 😉
ndiri mu internet cafe asi ini handina internet yekuwana pane yangu iphone ndinga gadzirise kuburikidza neitunes?
Pindura kuna danny
Iwe unofanirwa kugona
Jose Luis Gata Pizarro akadaro
Buenas tardes. Ndine ipad 3 uye ndagara ndichiita zvidzoreso kuburikidza neOTA. Ndiri kufunga kuita kudzoreredza sezvaunokurudzira, asi mubvunzo wangu unotevera. Ini ndinoshandisa zvinyorwa pamwe nekushandisa kwemakirasi angu, kwandakaisa mutsetse mabhuku uye manotsi, kugadzirisa maitiro, nezvimwe. Kana ndikadzorera ipad, ndingarasikirwe nebasa rese iri randakaita mukushandisa, kana pandinoridzorera, ndingazopora zvandakashanda pariri here? Ndiri kutarisira mhinduro yako. Ndatenda uye makorokoto eiyo peji uye inoyevedza podcast yamunoita
Pindura José Luis Gata Pizarro
Zvinoenderana nekushandisa. Kana iwe ukaisa iyo data kuICloud kana chero imwe sevhisi hauzove nedambudziko, asi kana ivo vari veko chete pane yako iPhone ivo vanozonyangarika.
Hi Luis, ndakagadzirisa iyo iPhone 6 neshanduro 9 uye 9.1 uye ndakarasa akawanda manotsi angu, ndingaadzosa sei?
Une iCloud syncing yakaitwa here?
Hongu Luis, ini ndakaishandisa
Zvakanaka ipapo kana iwe uine zvinyorwa muICloud zvaifanira kunge zvatorwa pasi. Edza kuremadza uye kumisazve.
Ndakaedza zvese uye haina kurodha pasi, ndakarasa zvinyorwa zvese zvemwedzi wapfuura! Handizive zvekuita…
Edza kudzorera iyo backup kubva iTunes
Ndatenda zvikuru, ndichaedza!
Chii chandinoita neBooks, kana ndikadzorera, ndinoirasa?
Yangu iphone 5s 32 Gb ine zuva rese "kudzoreredza" asi muTunes inoti "kumirira iPhone" uye pachiratidziro pane bhawa risingafambire mberi zvachose. Zvandinogona kuita? Ini ndaive neIOS 7 uye ndaida kudzoreredza uye kusimudzira kune iOS 9.
Mhoro Luis! makorokoto pane peji rako, ndine mubvunzo ... yangu iphone 5s kana ndisingakwanise kuwana yangu icloud kudzima yangu iphone, ndinogona kuidzosera mufekitori modhi uye kugadzira imwe icloud account? kana ndinofanira kuenda kuApple. maererano!
Unoda yako iCloud account. Edza kudzorera password yako kana kutaura neApple.
Kana ini ndikagadzirisa kuburikidza neOTA uye mune inotevera inotevera ndinozviita kuburikidza nekombuta, ko vhezheni yapfuura ichadzimwa here kana kuti icharamba ichitora ndangariro?
Pamusoroi kusahadzika .. Ndine iPhone 4 ine backup muIOS 7 nekuti kusvika iyo vhezheni yandinowana, ndiri kuenda kunotenga iyo iPhone 6, ndingaite sei kuti ndidzorere backup iyo yako iOS 9 system? Zvinogona? kana pane imwe nzira yekuzviita?
Ndinoshuva dai iwe waigona kundibatsira, ndatenda, kwaziso!
Ini handikupi zano iwe. Zvirinani kudzoreredza senge nyowani uye shandisa iyo data yakachengetwa muICloud (vanobata, manotsi, makarenda, nezvimwe)
Manheru akanaka Luis, ini ndakagadzirisa kune iyo nyowani vhezheni uye manotsi akarasika. Handina negadziriro yeparutivi configured uye kana iCloud. Pane imwe nzira yekuvadzosa?
Kana iwe usina ivo muICloud kana mune chero backup, zvinoita sekunge hapana chaunogona kuita
Mhoro Luis, ini ndinogadzirisazve yangu IPad nemagadzirirwo kwete neTunes, uye ini ndoona kuti yarasika simba, chii chandingaite? Zvingave here kuti kana ndikazviita kuburikidza neTunes, ini ndinokwanisa here kudzoreredza iyo yekutanga kugona?
Izvo zvinogara zvichikurudzirwa kuita yakachena kudzoreredza kuburikidza iTunes, uye kana iwe uchigona kumisikidza zvese neruoko uye usingashandise mabhakiti, zvese zvirinani
Hi Luis, zvinoitika kuti kana ndichiedza kumisazve yangu iPhone 6 kuburikidza neICloud nguva inopfuura maawa mana inoonekwa, uye kana ndikaiyedza kubva pachigadzirwa inondibvunza kodhi yekodhi, asi zvinosuwisa kuti handiyeuke kuti ndeipi kodhi ndizvo, ini ndakaedza nezviuru zvemubatanidzwa asi chandinowana kungokurumidza iyo inoti kuyedza mumaminitsi makumi matanhatu, chii chandinofanira kuita? Izvi zvine mhinduro here? Kutenda kwazvo
Kana ndikapa "Dele iPhone" mune yekushandisa bvisa yangu iPhone, chishandiso chinenge chisingashandisike? Kana chingaite senge chitsva uye kushanda zvakajairika?
Ichadzimwa uye iwe uchafanirwa kuitisa zvekare neako iCloud account.
Mangwanani, ipad yangu haindibvumidze kuvandudza vhezheni nyowani, yangu ipad ine vhezheni 5.1 uye nekuda kweshanduro iyoyo, haindibvumidze kurodha chero chirongwa, uye handigone kuchigadzirisa neimwe nzira, unogona kundibatsira , waita hako.
Luis Alejandro akadaro
Mhoro, husiku hwakanaka, yangu iPad yanga isina kodhi, ini ndakaedza zvese uye yatove kuoneka ipad yakavharwa, ini ndaida kuidzosa kubva kuTunes asi hapana chimwe chinowoneka ipad yakaremara, batanidza kune iTunes, chii chandingaite kurodhavira software uye ipad yangu yatosara, ndinomirira mhinduro
Pindura Luis alejandro
Mhoro vadikani. Manheru akanaka. ndiri alexandre. kana ndikadzorera yangu ipod yekubata kugadzirisa iyo ios kune vhezheni 9.3.1 kuburikidza neitunes. Kana ndatanga yangu iPod zvakare ndichafanirwa kuisa yangu icloud account yandaive nayo ndisati ndadzorera ??? Kana kuti ndinogona kuiisa pandinonzwa senge ??? maererano!
Pindura kuna alexandre
Kana kudzorera iyo iPhone 6 Plus kuvhura kwarasika?
Maitiro ekuchengetedza yako Apple Watch
Gadzirira kugadzirisa kune iOS 9